Ngwa 8 kachasị mma iji megharịa maka Android | Gam akporosis
N'ihi na ọ dịghị onye ọ bụ a nzuzo taa na ụwa na-agabiga mgbanwe. Ọnọdụ ụwa dum arịwanye elu na afọ ndị na-adịbeghị anya, ma ọ bụrụ na anyị anọgide na omume anyị na-ebukarị na ndụ anyị kwa ụbọchị, ọ ga-aga n'ihu na-abawanye, na-akpata, n'etiti ọtụtụ nsonaazụ ndị ọzọ na-adịghị mma, oke ọkụ, oke ọdachi na-akpata ọdachi (oké ọkọchị, idei mmiri, ifufe, wdg), mkpochapu nke umu anumanu, agbaze agbaze na ihe ndi ozo.
Okwu a dị oke njọ na otu dị ka UN, njikọta mba ụwa, gọọmentị na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere nnukwu mmetụta n'ụwa na-akwalite itinye usoro na atumatu iji belata ojiji nke ihe ndị sitere na mmanụ ala, mejuputa ojiji nke ume dị ọcha ( dị ka nke ìhè anyanwụ na ifufe) na mepụta ma kpalite omume nke imegharị ihe na enweghị mmetọ site na mkpofu, n'etiti ndị ọzọ, na nke ikpeazụ a bụ na anyị ewetara gị ọkwa a, iji nyere gị aka weghachite ihe mkpofu na ihe ị na-ejikarị, 8 nke ngwa kachasị mma maka nke a ugbu a dị na Storelọ Ahịa Play maka gam akporo.
Na mkpokọta a ị ga-ahụ Ngwa 8 kachasị mma maka gam akporo ị nwere ike ibudata ma wụnye site na Playlọ Ahịa Google. Ha niile bụ n'efu, ọ bara uru ịkọba.
1 Telodoygratis - ngwa iji megharịa ma nyefee ihe
2 Kedu ihe m ga-egweri?
3 Otu esi emeghari uwe ochie gi
4 Imegharị ihe Crafts
5 Ọ dị mfe iji ejiji akwa
6 Ihe mkpofu
7 Echiche ejirila uwe eji
8 Mkpofu na Ego
Telodoygratis - ngwa iji megharịa ma nyefee ihe
Anyị ga-amalite a chịkọtara na otu nke kasị adọrọ mmasị ngwa ọdịnala na gam akporo Play Store egweri. Telodoygratis bụ ngwa zuru oke iji ya Ga-enwe ike ịkekọrịta ihe ndị ahụ na ngwaahịa ndị ị na-agaghị ejizi ma mee atụmatụ ịtụfu ndị ọrụ ndị ọzọ nke ngwa ahụ. N'aka nke ya, ị ga-enwe ike nweta, site na nke a, ihe na ihe ndị nwere ike ịbara gị uru.
Ihu ọma, ọ bụ maka a n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ dị ka intermediary na-enye pụọ recyclable ihe nke mere na ha na-atụfu ma nweta ndụ ọhụrụ. Ọ pụtaghị na a ga-agbanwe ya; Nwekwara ike ịnye ma ọ bụ nata ihe na ihe ndị nwere ike iji recyclable na-enweghị ụdị mgbanwe ahụ.
Iji ngwa a ị nwere ike inye onyinye ihe niile site na uwe ruo n'ihe egwuregwu, yana nweta ihe mmasi gị nke onye ọzọ agaghịzi eji. Naanị ị ga-akpọtụrụ onye ọrụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ihe ha nwere.
Telodoygratis - ngwa iji megharịa ma nye ihe
Developer: TwinSMS usoro
Kedu ihe m ga-egweri?
Site na aha ị nwere ike nweta echiche nke ihe ebumnuche ngwa a bụ. Ebumnuche ya bụ ịduzi anyị na usoro ịmegharị, na-enyere anyị aka ịmata ihe akụrụngwa, ihe mkpofu na ihe mkpofu nwere ike ma ọ bụ enweghị ike imegharị., na maka nke a ọ nwere oke nchekwa data zuru oke nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịnweta, nke, dị ka ihe dị mma, na-agbasawanye mgbe niile, yana nchịkọta nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eme kwa ụbọchị banyere ihe enwere ike imegharị. N'aka nke ya, ị nwere ike ịbụ akụkụ nke obodo ha ma nyere aka na nchekwa data nke ihe eji emegharị emegharị na-eto.
Ihe ọzọ nke ngwa a na-emegharị maka gam akporo na-enyekwa bụ ihe nduzi ebe ị ga-ewega ihe mkpofu gị ka enwere ike imegharị ya. Ihe bụ ihe ọzọ, na-enye gị ozi metụtara ngbanwe nke nwere ike inye aka.
Ngwa a na - eto oge niile, ya mere ọ na - agbakwụnye ihe ndị ọzọ na - emegharị ihe ma na - aga n'ihu n'ihu.
Developer: Ngwa GemApps
Otu esi emeghari uwe ochie gi
Ọ bụghị naanị na ị nwere ike imegharị ihe mkpofu na ihe ndị dị ka plastik na iko; Enwere ike ighazigharị uwe. Kedu? Na ngwa a, otu nke ahụ Ọ ga - enye gị ọtụtụ echiche ị ga - eji tinye uwe ahụ na - adabaghị gị ma ọ bụ ogologo ọkpa nke mebiri na enweghị ike idozi ya.
Ngwa a nwere katalọgụ vidiyo nke ị nwere ike iji ejiji, uwe ogologo ọkpa, uwe elu, mkpụmkpụ, sweta na ndị ọzọ. Ọbụghị naanị na ịnwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ okike iji nyeghachi ya ohere ọ nwere na kọlọtọ gị, mana I nwekwara ike iwere uwe ọ bụla iji nye ya ihe ọhụụ na nke a na-atụghị anya ya.
Chegodi iji akpa uwe elu ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa iji jiri obere ihe, ma ọ bụ jiri akpa nke obere uwe iji gbanwee ya ka ọ bụrụ akpa bara uru. Enwere ọtụtụ echiche iji wezuga uwe ngwa ngwa, ngwa ngwa na ngwa ngwa site na nkuzi site na ntinye nzọụkwụ. Nyochaa ihe niile ngwa a nwere maka gị ma tufuo uwe na-anaghị efe gị, ma na-enyere aka izere imetọ gburugburu ebe obibi na-enweghị isi.
Otu esi emeghari uwe ochie gi.
Developer: choo m
Imegharị ihe Crafts
Ọ bụrụ na, na mgbakwunye na ịchọrọ inyere gburugburu aka site na iji usoro imegharị ihe, ịchọrọ ma chọọ itinye ọrụ aka site na nkasi obi nke ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla nwere ọtụtụ ihe mkpofu dị ka plastik, kaadiboodu, iko na ihe ndị ọzọ, ngwa a ga-enyere aka ị ọ ga-abụ nnọọ mma na-akpali.
Iji ngwa a, ọ bụghị naanị na ị ga - eme obere ọrụ iji nyere aka belata ma zere nsogbu nsonaazụ gburugburu ebe obibi, mana ị ga - etinyekwa n'ọrụ niile nka ị nwere na ọkwa nka na nka. Ọ nwere ọtụtụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi iji mee ka ahịhịa na ihe mkpofu ghọọ ihe eji eme ihe na ihe ịchọ mma maka ụlọ gị ma ọ bụ ụmụaka, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmeere ha ihe egwuregwu, dịka ọmụmaatụ.
E nwere ọtụtụ katalọgụ nke ị nwere ike inyocha ọtụtụ echiche iji chọọ ogige gị ma ọ bụ ụlọ ọ bụla dị n'ụlọ gị mma, gịnị kpatara ya? Ga ahụ onwe gị n’ihu ọtụtụ ọnụọgụ nduzi ga-aba uru ma nwee mmasị na gị. Lelee ha ma weghachite ihe mkpofu n'ụzọ okike na nke ụtọ!
Ọ dị mfe iji ejiji akwa
Nke a bụ ngwa ọzọ anyị nwere ike iji duzie onwe anyị iji nye ndụ ọhụrụ uwe anyị na-ejighịzi, ma obu nihi na anyi enwekwaghi ya, o gbajiri ma obu stainiko. Gbazigharị uwe dị mfe bụ ngwa ọhụrụ nke na-abawanye katalọgụ nke nkuzi site na ntinye iji ghara ịtụfu uwe ndị ahụ n'oge ụfọdụ anyị ga-aga iri nri, na fim, maka iso ndị enyi anyị ma ọ bụ pụọ n'ụlọ.
O nwere ike ịbụ na ihe ọzọ ị chọrọ ịtụfu uwe gị bụ maka na ha adịghị mma. Ọ dị m nwute banyere ikpe a ọzọ, Iji ngwa a ị nwekwara ike iji akwa nke uwe a kwuru, ma ọ bụ were ya dum, iji nye ya ebumnuche okike ọzọ, na ihe niile site na nkuzi vidio nke ngwa a na-emegharị na-enye gị.
A ga-achọ ọrụ aka iji malite usoro mmegharị nke uwe ị na-achọghịzi, jiri ngwa na ngwa ndị dị mfe gụnyere iji mkpa na agịga. Redesign uwe ndị ahụ ịchọrọ iwepụ ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị oge ọzọ, ma ghara imetọ gburugburu ebe obibi n'ụzọ enweghị isi na ngwa a iji megharịa.
Developer: Appbox na-akwụghị ụgwọ
Ọ bụrụ na ị si na Catalonia, ngwa a nwere ike ịdọrọ gị na pel. Na ahihia ị ga-enwe ngwa ọrụ nke ị nwere ike iji chọpụta nke ọma ihe mkpofu na ihe ndị nwere ike imegharị, ihe nwere ike isitụ ike mgbe ụfọdụ, ọkachasị n’ihi ọtụtụ ihe ndị amachaghị na ọ na-esiri ha ike ikpebi ma enwere ike ighazigharị ha ma ọ bụ na ha agaghị.
Otu isi megide bụ na ọ nweghị asụsụ Spanish, yabụ Anyị anaghị akwado ya ma ọ bụrụ na ị maghị etu esi asụ Catalan. Ha nwere ike itinyekwu asụsụ n'ọdịnihu, mana enwere obi abụọ n'ihi na e mepụtara ngwa ahụ ma mepụta naanị maka obodo ndị Catalan.
Echiche ejirila uwe eji
Ebe anyị matara na uwe bụ otu n’ime ihe a na-atụfukarị mmadụ niile na ndụ ya, ebe a ọzọ na ngwa na metụtara uwe imegharị ihe maka iji. Ma ọ bụ na echiche eji emeghari uwe eji eme ihe bụ ngwa nke na-enye ndị na-adọrọ mmasị ma dị iche iche nduzi banyere ihe anyị nwere ike inye uwe elu ahụ nke anyị na-agaghịzi eji ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa anyị ga-atụfu n'ihi na ọ mebiri emebi, inye ihe atụ .
Na ngwa a ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ịmepụta uwe ọhụrụ na uwe eji eji akwa a ga - atụfu, kamakwa Nwekwara ike ịmepụta ngwa dịka olu, ọla aka, ịchafụ na ndị ọzọ site na iji ya. Ihe okike bu ihe inwere ike iji ya me ihe. Nwedịrị ike ịme nkịta na ụmụ anụmanụ na-eri nri, ma ọ bụ mee elu ụlọ. Enweghị ihe ngọpụ ịghara imegharị uwe!
Developer: SOPHIA MIRANDA
Mkpofu na Ego
Iji mechaa ndepụta a nke ngwa ngwa kacha mma maka gam akporo, anyị gụnyere egwuregwu a, nke ya na ya Nwere ike ịgba ume ka omume nke ụlọ kacha nta na, gịnị kpatara, igwu egwu iji gbuo ike ọgwụgwụ.
Ọ bụ egwuregwu na-abịa na mgbagwoju anya na egwuregwu mgbagwoju anya, ihe niile metụtara imegharị ihe mkpofu. Nye ihe ndị ahụ ahazi ma hazie omume gị nke ọma iji nyere gburugburu ebe obibi aka na gburugburu ebe obibi. Enwere ike igwu ahịhịa na Cash n'enweghị njikọ ịntanetị, na-eme ka ọ dị mma igwu egwu ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. I nwekwara ike soro ha na ndị enyi gị gwuo egwu site na iji ọtụtụ egwuregwu, iji mee ka ọ bụrụ ihe ntụrụndụ na ihe ọchị.
Nweta ụgwọ ọrụ na ọkwa ọ bụla ị gafere ma chekwaa mbara ala na egwuregwu a, ebe ị na-enwekarị omume ịmegharị iji tinye ya na ndụ n'ezie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 8 kachasị mma maka gam akporo
Echiche aha mbụ maka Instagram